Ndi oru SEO di ntakiri maka obere nchekwa ahia?
Ọ bụ ezie na "obere ọnụahịa SEO = ihe ize ndụ" bụ kama akụkọ ifo karịa ezigbo nkwupụta, ikpe ọjọọ SEO maka ego dị ọnụ ala abụghị ihe a na-adịghị ahụkebe. Obere ụlọ ọrụ nwere ike ịkọwa nsogbu a dị ka ụlọ ọrụ SEO dị ntakịrị dị na-echekarị ha na ụlọ ọrụ dị iche iche na ọtụtụ ụlọ ahịa ha na ọtụtụ onyinye ha dị mma maka ụlọ ahịa na saịtị ndị na-agbalị ịkwalite nhei asọmpi.
Ịgbaso ihe ndị a dị ntakịrị SEO na-enye n'amaghị ama nwere ike iduga na nsonaazụ ndị a:
Ụgwọ n'ihi Black Hat SEO. Ọtụtụ ụlọ ọrụ SEO ndị na-agbazi ntụziaka Google na mkpirịta ụka ndị na-agba gburugburu, ihe odide ezo, ụzọ ụzọ na omume ọjọọ ndị ọzọ na-enyekarị ọnụ ala dị ala maka ọrụ ha. Nke a bụ akụkụ nke ọnyà ha: ha na-ekwe nkwa nkwalite dị elu na-adọrọ mmasị ma na-ewepụta mmelite ahụ e kwere ná nkwa. Ụkpụrụ dị otú ahụ na-eme ka ha nwee ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọrụ na-amaghị ihe na-amaghị na ogo ogo na-enweta site na Black Hat SEO bụ nwa oge na nnukwu dobe agaghị ekwe omume.
Stagnation. Mgbe ụfọdụ, ị na-ahụ ọnụahịa SEO maka obere azụmahịa ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-abụghị okpu ojii. Kama nke ahụ, ha na-ejedebe na nhọrọ nkwalite na usoro niile ndị otu na-enweghị ahụmahụ na-arụ. Ya mere, mgbe ị rụchara isi ihe, mkpọsa gị na-agbapụta ebe ahụ dịka ndị na-eme SEO amaghị ebe ị ga-esi ebe a pụọ. Ha nwekwara ike ọ gaghị enwe ike ịme ọganihu, dịka ọnụahịa dị ala = ụgwọ dị ala.
Ogologo ọdịnaya nke ọdịnaya. Ọdịnaya na-ekere òkè dị ukwuu na njikarịcha okwu, njikọ njikọ yana ọnụ ọgụgụ ntọghata na-aba ụba. Otú ọ dị ọ bụrụ na ọdịnaya gị adịghị mkpa, pụrụ iche ma ọ bụ mmasị ịgụ, itinye mkpụrụokwu na njikọ agaghị abawanye ọkwa gị. O di nwute, mbipụta ederede nke gụnyere oru efu SEO maka oru ugwo na-achoghi nyocha na idezi dika ndi otu a enweghi ndi dere akwukwo. Ya mere, atụla anya na ị ga-enweta ihe dị ukwuu site na ọdịnaya ị kwụrụ $ 10 maka.
Ozi a apụtaghị na i kwesịrị izere "ọnụ" na "ọnụ ala" SEO ọ bụla ọ bụla. Ihe ị kwesịrị ime, bụ ịmara ihe ize ndụ dị na ya mgbe ị na-achọ ọrụ ego SEO maka obere azụmahịa gị. Ọnụ ọnụ adịghị adịka ọnụ ala mgbe niile, na iwu ọnụahịa ọnụ abụghị ụdị okwu ọjọọ. Ọ bụ ezie na e nwere ụlọ ọrụ ọjọọ, nke na-emebi aha nke ụlọ ọrụ SEO, anyị ga-enyere gị aka ịhụ ọdịiche.
Cheap vs affordable: kedu ihe dị iche?
Enwere ike ịchọta ezigbo SEO maka ọnụahịa zuru oke site n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ala. Ịkwesighi ịbụ Guru SEO ma ọ bụ nwee onye nchọpụta ụgha. Nnyocha nyocha nke zuru oke karịa.
Dee ndepụta nke ụlọ ọrụ SEO, nke na-enye ndị ọkachamara ọrụ ọnụ ala maka obere ụlọ ahịa dị n'Ịntanet;
Tụlee ụgwọ ha na ọtụtụ ọrụ ha na-enye maka ụgwọ ahụ;
Leba anya n'uzo ha si akwalite onwe ha: oburu na ha ekwe nkwa ugwo ngwa ngwa na ugwo olu ha, nkwa ha ga adighi nma;
Lelee ma ụlọ ọrụ niile nwere folda. Gafee ụlọ ọrụ na-enweghị otu. Mgbe ahụ, gụọ ọrụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ iji nyochaa ọrụ ha. I nwekwara ike ịga na saịtị ndị ụlọ ọrụ ahụ mere SEO iji hụ otú ha ga-esi merie ndị asọmpi ha.
Kpọtụrụ ndị ọkachamara nke ụlọ ọrụ ọ bụla ma chọpụta ụdị mmetụta ha na-eme, ma ha nwere obi ike na enyi na enyi ma ọ bụ na nzuzo, enweghị nchekasị na ngwa ngwa iji mee ka ị zụta ngwaahịa ha. Jụọ ha ajụjụ ndị ga-eme ka ha mata ihe gbasara nduzi Google, usoro nkwalite na usoro SEO. Ndi ha na-agba ngwa ime gi nkwa na obughi icho ozo banyere ebe gi? Hà na-emesi ike na njirimara na ihe dị mkpirikpi?
Nyochaa ihe omumu na ndu nke ulo oru. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ndị nwere afọ ise nwere ahụmahụ dị mma, echela ngwa ngwa ịhapụ ụlọ ọrụ afọ atọ na atọ. Ọtụtụ ndị na-eto eto na ụlọ ọrụ na-esite n'aka ndị ọkachamara na-azụ ahịa maka afọ 10. A ga-ekwukwa okwu a na bio ọrụ na blog ma ọ bụrụ na e nwere otu.
Lelee nyochaa. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ ndị akwụ ụgwọ niile na-etinye nyocha ha na saịtị ha ma ọ bụ nwee akaụntụ na nyochaa weebụsaịtị iji mee ka ndị ọrụ hapụ nzaghachi ma zaghachi ya. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ, nke na-enye ụgwọ dị ala SEO ọrụ maka obere azụmahịa n'ịntanetị na-ezere iso na-ekwurịta okwu, ọ ga-abụ na ọ gaghị adị mma ịmekọrịta.
N'oge a, ụlọ ọrụ SEO dị n'ụdị dịgasị iche iche ma bịaruo iwu ọnụahịa ha dị iche iche. Ya mere, karia ịgbanarị otu òtù SEO, nke na-enye gị ihe ngwọta ego, mee nyocha gị ma hụ ezigbo nkwụnye ego na mma Source . Ma o nwere ike ị gaghị enwe ihe ụfọdụ dị ịtụnanya!